बुधबार, १३ भदौ २०७५, ०४ : २८ | अनिल यादव
तीज, दसैँ र तिहार । यी तीन पर्व नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीका लागि सधैँ प्रतिक्षित हुने गर्छ । कारण– हलमा बढी दर्शक आइपुग्ने आशा ।
यो साल पनि बहुप्रतीक्षामा छन् भदौ २२, असोज ३० र कार्तिक २१ । यी तीन मिति फिल्म क्षेत्रमा अहिले बहसको केन्द्रमा छ । कारण– ठूल्ठूला ब्यानर र पपलुर फिल्मकर्मीले यिनै मितिमा आफ्नो फिल्म रिलिज गर्ने घोषणा गरेका छन् । भदौ २२ मा ‘रामकहानी’ भर्सेज ‘रोज’, दसैँमा ‘६क्कापञ्जा–३’ भर्सेज ‘जय भोले’ र कार्तिक २१ मा ‘मालिका’ भर्सेज ‘क्याप्टेन’ जुध्दैछन् ।
यी तीन मिति राम्रो व्यापारको आशामा फिल्म निर्माताबीच फिल्म रिलिजको प्रतिस्पर्धा हुन लागेजस्तो देखिए पनि कुरा यत्तिमा मात्रै सीमित छैन । यो जुधाइ फिल्मकर्मी बीचको इगो, स्टारडम र प्रतिष्ठाको लडार्इं पनि हो ।
सातामा दुई–तीन वटा फिल्म रिलिज हुनु नेपाली हलका लागि नौलो होइन । अघिल्लो साता मात्रै हलमा चार वटा नेपाली फिल्म एकै दिन रिलिज भएकै हो तर इगो, स्टारडम र प्रतिष्ठाको लडाईं जोडिँदा यी तीन मिति बहस र चर्चामा आएको हो ।
त्यसैले भदौ २२ मा ‘रामकहानी’ भर्सेज ‘रोज’ मात्र हैन सुदर्शन थापा भर्सेज निरक पौडेल र प्रदीप खड्का भर्सेज पूजा शर्मा पनि हो । दसैँमा ‘६क्कापञ्जा–३’ भर्सेज ‘जय भोले’ मात्र हैन, दीपकराज गिरी भर्सेज अशोक शर्मा पनि हो । अनि कार्तिक २१ ‘मालिका’ भर्सेज ‘क्याप्टेन’ भन्दा बढी रेखा थापा भर्सेज भुवन केसीको लडाईं पनि हो ।
चलचित्र निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव भट्टराई फिल्मकर्मीहरुबीच देखिने दम्भ र इगोका कारण अहिले फिल्म जुधिरहेको बताउँछन् ।
‘हामीकहाँ फिल्म रिलिज हुनु एक घन्टा अघिसम्म सबैका सिनेमा सुपरहिट हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कोही पनि आफ्नो सिनेमाभन्दा अर्कोको राम्रो होला भन्ने स्वीकार्दैन् । कोही पनि ब्याक जान तयार हुँदैन । यसको सिनेमालाई हान्ने हो भनेर तयारी गरेर बसिरहेका हुन्छन् । खोई कहाँ हान्ने हो, कसरी हान्ने हो ?’
को ठूलो स्टार ?
पछिल्लो समय प्रदीप खड्का नेपाली फिल्ममा युवा स्टारका रुपमा उदाउँदै गरेका अभिनेता हुन् । आफैँले निर्माण तथा अभिनय गरेको फिल्म ‘इस्केप’ र निर्माण गरेको ‘ठूलो मान्छे’ सुपरफ्लप भएपछि हरेस खाएर अस्ट्रेलिया जाने मन बनाइसकेका प्रदीपलाई तीन वर्षअघि निर्देशक सुदर्शन थापाले ‘प्रेमगीत’ फिल्मबाट लभरब्वाईका रुपमा पर्दामा उतारेका थिए ।
उनको त्यो लभरब्वाई अवतार दर्शकले रुचाए । फिल्म वृत्तमा उनी चम्किए । माग बढ्यो ।
जुन फिल्मबाट प्रदीप स्टार पथमा हिँडे, अहिले त्यही फिल्मका निर्देशक थापा र को–स्टार पूजा शर्मासँग उनको फिल्म भिड्ने तयारीमा छ । जसलाई सुदर्शनले हिरोका रुपमा चम्काए, आज उनै हिरो उनको फिल्मको बाधक बनेका छन् ।
कारण अर्को रिलिज डेटको भन्दा तँ भन्दा म के कम भन्ने इगोको हो ।
अहिले प्रदीपसँग पूजा र सुदर्शनको सम्बन्ध राम्रो छैन । पूजा र सुदर्शन एकातिर, प्रदीप अर्कोतिर छन् ।
उनीहरुको सम्बन्ध ‘प्रेमगीत’ को सफलतापछि चिसिएको हो ।
‘प्रेमगीत’का निर्माता सन्तोष सेनले यसको सिक्वेल ‘प्रेमगीत–२’मा निर्देशनको जिम्मेवारी सुदर्शनलाई नसुम्पिएर अर्का निर्देशक रामशरण पाठकलाई सुम्पिएपछि आन्तरिक खटपट सतहमा आयो ।
कुनै बेलाका राम्रो साथी सुर्दशनसँग मिलेर सन्तोषले ‘चंखे शंखे पंखे’ पनि बनाएका थिए तर दुवै सम्बन्ध चिसियो अनि नायक–नायिका पनि छुट्टिए । प्रदीप निर्माता सन्तोषको साथमा गए, पूजा सुदर्शनलाई साथ दिन थालिन् । उनीहरु बीचको इगोको टकराव सुरु भयो । सन्तोषले प्रदीपलाई लिएर ‘प्रेमगीत–२’ बनाए, सुदर्शनले पूजालाई लिएर ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ बनाए ।
त्यतिबेलै यी दुवैको फिल्म एकै मितिमा रिलिज हुने चर्चा चलेको थियो तर भएन । ‘सायद–२’ सँग भिड्यो सुदर्शनको फिल्म ।
यी लफडाबारे जानकार स्रोतका अनुसार फिल्म नजुध्नुमा प्रदीपको भूमिका बढी थियो । उनी सकेसम्म आफ्नो फिल्म पूजाको फिल्मसँग नजुधोस् भन्नेमा थिए । कारण– प्रदीप र पूजा बीचको स्टारडम नै दुविधामा थियो ।
बीचमा कुनै नाटकीय मोड नआए ‘रामकहानी’ र ‘रोज’ एकै मितिमा रिलिज हुने पक्का छ । यसलाई प्रदीप र पूजा बीचको स्टारडमको परीक्षाका रुपमा लिइएको छ । जसको फिल्म चल्यो ऊ हिट, जो ढल्यो फ्लप । खेल खत्तम ।
भदौ २२ को रिलिज डेट ‘रोज’ भन्दा पहिले ‘रामकहानी’ले तय गरेको थियो । छायांकन सुरु भएको तीन महिना नबित्दै ‘रोज’ले ‘रामकहानी’सँग भिड्ने पक्का ग¥यो । यसपालि प्रदीप आफैँ पूजासँग भिड्न आए ।
‘रामकहानी’सँग ‘रोजी’लाई भिडाउनुमा कतिपयले प्रदीपको काम हो भन्नेको कुनै कमी छैन फिल्म उद्योगमा तर यसलाई प्रदीप स्वीकार गर्दैनन् ।
‘फिल्म त अहिले पनि हप्तामा चार वटा रिलिज भइरा’छ, दुइटा जुध्नु ठूलो कुरा होइन,’ उनले शुक्रवारसँग भने, ‘सुदर्शन दाइ, पूजासँग मेरो सम्बन्ध बिग्रिएको हल्लाले गर्दा यस्तो शंका भएको मात्र हो । फिल्म कहिले लगाउने, त्यो मेरो अधिकारको कुरै होइन । मलाई यसको मास्टरमाइन्ड भनेर हल्ला चलाएको सुनेँ । यो मेरो तारिफ भएको हो कि आलोचना बुझ्नै सकिनँ ।’
फिल्म जुधाउनुमा प्रदीपको भूमिका कति छ, त्यो त बिस्तारै खुल्ला तर ‘रोज’का निर्देशक निरक पौडेल ‘रामकहानी’सँग फिल्म जुधाउने समयको प्रतीक्षामा थिए ।
९ वर्षअघि भदौ २६ मा निरकको ‘कुसुमे रुमाल–२’सँग सुदर्शनको ‘मेरो एउटा साथी छ’ भिडेको थियो । यो दुवैको पहिलो फिल्म थियो । त्यतिबेला बक्सअफिसमा ‘मेरो एउटा साथी छ’ले बाजी मा¥यो । निरक हेरेको हे¥र्यै भए । त्यही बेलाको बदला उनी प्रदीपको सहयोगमा यो पालि लिँदैछन् । यसमा उनलाई उनको दिदी तथा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको पनि साथ देखिन्छ ।
आफूले निर्माण तथा अभिनय गरेको फिल्मसँग ‘रोज’ जुध्न आएपछि अभिनेत्री पूजा शर्मा अत्तालिएकी देखिन्छिन् । ‘रोज’ जुध्न आउनुलाई उनले विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिताको ‘प्लान’ भन्दै लामो पत्रै लेखिन् ।
‘चलचित्र विकास बोर्डको महिला अध्यक्ष भनेर चलचित्रकर्मीको सहयोग र सिम्प्याथी पनि लिनुहुन्छ तर सबैलाई मिलाएर चलचित्रको विकासमा ध्यान दिनुभन्दा एउटा महिलाले नै निर्माण गरेको चलचित्रसँग जुधाएर कुन विकासको लागि लड्दै हुनुहुन्छ ?’ उनले फेसबुकमै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
दीपक–दीपा भर्सेज अशोक शर्मा
दसैँ त्यसै पनि विशेष हुने नै भयो । लामो बिदा र फेस्टिभल मुड हेरेर फिल्मी क्षेत्रका हस्तीसमेत यही मौकामा आफ्नो व्यापार चम्काउने दाउमा हुन्छन् ।
यसपालिको दसैँमा हलमा नेपाली फिल्मी क्षेत्रका दुई हस्ती भिँड्दैछन् । हल्काफुल्का विषयलाई जोडेर हास्यरस पस्कन माहिर दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला तथा फिल्म निर्माणबाट टाढिएर फिल्म प्रदर्शनमा व्यस्त भएका अशोक शर्मा ।
दीपक–दीपाको ‘६क्कापञ्जा–३’ र लामो समयपछि शर्माले बनाएको ‘जय भोले’ को रिलिज डेट दसैँ नै हो ।
टन्नै नकारात्मक टिप्पणी भए पनि व्यापारको आँकडामा ‘६क्कापञ्जा’ सफल छ । यो नाम नेपाली फिल्म उद्योगमा एक प्रकारको ब्रान्ड नै बनिसक्यो भन्दा फरक पर्दैन ।
लामो विश्रामपछि फिल्म निर्देशनमा फर्किएका अशोक चल्तीको ब्रान्डसँग किन आफ्नो फिल्म ‘जय भोले’लाई भाले जुधाइमा भिडाउँदैछन्, धेरैको चासो यही हो ।
“‘छक्का पन्जा’ आफैँमा ब्रान्ड बनिसकेको छ । दसैँसम्ममा ‘जय भोले’ पनि ब्रान्ड बनिसक्छ,” शर्माले फिल्मको गीत रिलिज कार्यक्रममा भनेका थिए, “दसैँमा दुई फिल्म चल्दा केही हुँदैन ।”
अशोकले एकै दिन दुई वटा फिल्म जुध्दा केही फरक पर्दैन भने पनि यसले व्यापारमा राम्रै असर पर्नेबारे फिल्म क्षेत्रका राम्रै खेलाडी रहेका उनी जानकार नहुने कुरै भएन ।
यसको पहिलो कारण देखिन्छ ‘६क्कापञ्जा–२’ । यो फिल्मका बेला दीपक–दीपाले शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको डिजिटल सिनेमा नेपाल (डिसिएन)लाई फिल्म प्रदर्शनको अधिकार दिने सम्झौता गरेका थिए तर मोफसलको हल कब्जामा राख्ने सामथ्र्य भएको फिल्म वितरण कम्पनी एफडीले अर्को फिल्म ल्याउने राजनीति बनाएपछि दीपक–दीपाले ‘६क्कापञ्जा–२’ वितरण अधिकार एफडीलाई दिए, अशोक चिल्लै परे । यसपछि अशोक यो दसैँमा दीपक–दीपालाई चिल्लै पार्ने योजनामा लागे ।
दीपकले पनि यस्तै हल्ला सुनेका रहेछन् । शुक्रवारसँग भने उनले, ‘मैले पनि बजारमा त्यस्तै हल्ला सुनेको छु । आफ्नो फिल्म कसलाई दिने भन्ने बिजनेसको कुरा हो, म जसलाई पनि दिन सक्छु । अशोक दाइ पहिले वितरक हुनुहुन्थ्यो, अहिले निर्माता बन्नुभएको छ । पहिला केही राजनीति भएरै एफडीलाई फिल्म दिएका थियौँ ।’
दीपा–दीपक शर्मासँग डराउनुको कारण हलमा शर्माको पकड पनि हो । शर्माको कम्पनी डिसिएनको धेरैवटा मुख्य हलमा पकड छ, जहाँ उनले सजिलै आफ्नो फिल्म लगाएर दीपा–दीपकको फिल्मलाई रोक्न सक्छन् ।
त्यसैले दीपक सकेसम्म शर्माको फिल्मसँग आफ्नो फिल्म जुधाउने पक्षमा छैनन् । उनी निकट स्रोतका अनुसार बरु एक साता वरै आफ्नो फिल्म रिलिज गर्ने कि भन्ने गृहकार्यमा लागेका छन् उनी । एक साताअगाडि रिलिज भए पनि दसैँसम्म हलमा फिल्म चल्ने उनको आँकलन देखिन्छ ।
तर औपचारिक कुराकानीमा उनी यो मान्दैनन् ।
‘यसका अरु दुई सिरिज राम्रो चलेकाले मलाई घाटा लाग्दैन,’ उनले भने ‘तैपनि सकेसम्म नभिडाउने नै सोच छ । ‘जय भोले’ को टिमसँग कुरा गरिरहेको छु ।’
उता निर्देशक शर्मा भने भिडाउने मुडमै देखिए ।
‘जुन फिल्म राम्रो छ, दर्शकले त्यही हेर्छन्,’ उनले भने, ‘कुन हेर्छन् भनेर अहिले नै थाहा हुँदैन । रिलिजपछि सबैलाई थाहा भइहाल्छ ।’
यी दुवैले आफ्नो फिल्म चलाउन आ–आफ्नै रणनीतिसमेत सुरु गरिसके । दीपक–दीपाले फिल्मको चर्चा गराउन मिडिया कब्जाको रणनीति लिएका छन् । यसका केही संकेतसमेत देखिइसकेको छ । दीपक–दीपाको नयाँ–पुराना दुवै पुस्ताका रंग सञ्चारकर्मीसँग राम्रो सम्बन्ध देखिन्छ । शर्मा नयाँ रंग सञ्चारकर्मीसँग त्यत्ति भिजेका छैनन् । यसले फाइदा हुने दीपा–दीपकको निष्कर्ष हुनसक्छ ।
अशोक भने हल कब्जाको रणनीतिमा छन् । फिल्म निर्माण र वितरणमा बनेको सम्बन्धलाई राम्रै उपयोग पनि गर्नसक्छन्, उनले आफ्नो फिल्मको व्यापारका लागि ।
‘मिडिया कब्जा त कसरी सम्भव होला र ? तर हल कब्जा भने हुन सक्छ,’ रणनीतिबारे जिज्ञासा राख्दा शर्माको उत्तर थियो, ‘हल कब्जा भनेको व्यापारको कुरा हो । लामो समयदेखि फिल्म वितरण र निर्माणमा सक्रिय छु । त्यसैले मप्रति हलहरुको सहानुभूति हुनु स्वभाविक हो ।’
शर्माले उपत्यका र मोफसलका मेजर स्टेसनहरुका राम्रा र बढी व्यापार गर्ने हल बुक गरिसकेका छन् ।
फिल्म मात्रै हैन यी दुई फिल्मको कलाकार पनि भिँड्दैछन् । ‘जय भोले’मा स्वस्तिमा खड्का प्रमुख भूमिकामा छिन् । दीपक–दीपाको ‘६क्कापञ्जा–३’मा पनि उनको अभिनय छ ।
रेखाविरुद्ध भुवनको रणनीति
कात्तिक २१ अर्थात् तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन । अभिनेत्री रेखा थापाको निर्माण, निर्देशन तथा अभिनय रहेको फिल्म ‘मालिका’ रिलिज हुने मिति हो तर पछिल्लो समय यही मितिमा भुवन केसी निर्मित, अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’ पनि रिलिज हुने चर्चा छ ।
‘क्याप्टेन’ को सुटिङ सकिएको छैन तर भुवन केसीले आफू निकटलाई रिलिज डेट तोकेर जानकारी नै दिइसके । रेखाको फिल्मसँग अनमोलको फिल्म जुधाउन खोज्ने भुवनको कारण भने अचम्मको छ ।
निकटस्रोतका अनुसार रेखाले अनमोल केसीको विरोधमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै ‘दुइटा फिल्म खेल्ने कलाकारलाई मिडियाले मेगास्टार भनेर उचालेको तर आफूले हिरो जसरी लामो समय फिल्म क्षेत्रमा राज गर्दा पनि मेगास्टार भन्न डराएको’ बताएकी थिइन् ।
यसलाई धेरैले अनमोल लक्षित अभिव्यक्ति भनेर अड्कले । उनले फेरि अनमोलका समकालीन प्रतिस्पर्धी अभिनेता प्रदीप खड्कालाई अहिलेको नम्बर १ अभिनेता भनेर प्रशंसा गरिन् ।
अनमोलको कटाक्ष र प्रदीपको प्रशंसाले रेखासँग भुवन रिसाए ।
‘क्याप्टेन’ युनिटका एक सदस्यको दाबी भने अलि फरक छ । उनको दाबी पत्याउने हो भने ‘क्याप्टेन’ तिहारअगाडि रिलिजै हुँदैन ।
त्यसो भए रेखासँग फिल्म जुधाउने हल्ला किन चलाएको त ?
‘अनमोललाई गाली गरेका कारण भुवन दाइ रेखासँग रिसाउनुभएको छ । त्यसैले रेखालाई तर्साउन फिल्म जुधाउने चर्चा चलाइएको हो । त्यो मितिमा ‘क्याप्टेन’ रिलिज गर्न गाह्रो छ ।’
फिल्म सार्नुको खास कारण भने रेखाको फिल्मभन्दा पनि हिन्दी फिल्म रहेछ । उनको दाबीअनुसार त्यो मितिमा आमिर खानको ‘ठग्स अफ हिन्दोस्तान’ पनि रिलिज हुँदैछ । खानको नेपालमा पनि उत्तिकै फ्यान छन् नै । ‘कृ’पछि अनमोलको खस्कँदो स्टारडमलाई उनले खानको फिल्मसँग नजुधाउने ‘क्याप्टेन’ टिमका ती सदस्यको तर्कमा दम देखिन्छ ।
यता ‘क्याप्टेन’ जुध्न आउने खबर रेखाले पनि अनलाइनमा पढिछन् तर आफू आफ्नो फिल्मप्रति पूरै विश्वस्त रहेको बताइन् । ‘म कसैको फिल्मसँग जुध्न गएको होइन,’ रेखाले भनिन्, ‘धेरै पहिले रिलिज डेट फाइनल गरेको हुँ तर कोही मेरो फिल्मसँग जुधाउन आउँछ भने त्यो मेरो प्रोब्लम होइन, उसैको हो । मलाई एक पर्सेन्ट पनि डर छैन ।’
भुवनसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा मंगलबार साँझ उनको मोबाइल स्वीच अफ थियो ।
कुन फिल्मको लगानी कति हो पुष्टि हुने गरी कुनैको पनि विवरण सार्वजनिक भएको छैन । कुनमा कति लगानी भयो फिल्म निर्माताले गरेको दाबी नै लगानी रकमको आधार हो ।
निर्माता÷निर्देशक सुदर्शन थापाको दाबीअनुसार ‘रामकहानी’को बजेट फिल्म रिलिज भइसक्दासम्म दुई करोड २५ लाख पुग्छ । उता ‘रोज’को लगानी पनि दुई करोड पुगिसकेको दाबी छ ।
त्यस्तै दीपकराज गिरीका अनुसार ‘६क्का पञ्जा–३’को बजेट दुई करोड हो । ‘जय भोले’का निर्माता÷निर्देशक अशोक शर्माको दाबीअनुसार फिल्म रिलिज भइसक्दा यो फिल्मको कुल लगानी १ करोड ७० लाख पुग्छ ।
त्यस्तै रेखाको ‘मालिका’को बजेट फिल्म रिलिज हुँदासम्म ९५ लाख पुग्ने बताइएको छ । उता अनमोल केसी अभिनित ‘क्याप्टेन’को बजेट २ करोड बताइएको छ ।
दुई ठूला सिनेमा एकैदिन रिलिज हुँदा दुवै फिल्मका निर्मातालाई घाटा हुने बताउँछन्, चलचित्र निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशव भट्टराई । भट्टराईसँग सहमत छन्, वितरक तथा हल संचालकको संगठन नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय । ‘एउटा ठूलो फिल्म हलमा आउँदा अर्को ठूलो फिल्म नआइदिएको राम्रो हो,’ उनले भने ।
चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष सन्दीप सापकोटा नेपाली फिल्मको बजार सानो भएकाले यसरी ठूल्ठूला फिल्म एकैदिन जुध्दा निर्माताको लगानी जोखिममा पर्ने बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय दर्शकले हास्य कलाकारका फिल्म बढी रुचाइरहेका छन्,’ सापकोटाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हास्य कलाकारको वर्चश्व रहेको फिल्मले नै बाजी मार्ने सम्भावना देख्छु ।’
फिल्म निर्देशक दीपेन्द्र के. खनाल पनि राम्रा फिल्म एकसाथ प्रदर्शनमा आउनु सुखद् ठान्दैनन् । ‘आफ्नो मात्र फिल्म राम्रो ठान्ने, अरूलाई नगन्ने प्रवृत्तिका कारण हामीकहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा पर्दापछाडि वितरकको इगो पनि जोडिएको हुन्छ ।’
अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र संघ
नेपालमा बर्सेनि सयको हाराहारीमा फिल्म बन्छन् । त्यसो हुँदा सबै निर्माता आफ्नो फिल्म राम्रो डेटमा रिलिज होस् भन्ने चाहन्छन् । सबैले चाडपर्वमा बढी व्यापार हुन्छ भनेर मिति ताक्छन् । त्यसैले पनि फिल्म जुध्ने गरेको हो ।
यो ठूला कुरो त होइन तर एउटा ठूलो फिल्म हलमा आउँदा अर्को ठूलो फिल्म नआइदिएकै राम्रो । यस्तो अवस्थामा हलले जुन फिल्मको चर्चा, ट्रेलर र गीत राम्रो छ, उसैको फिल्मलाई बढी महङ्खव दिन्छ । यस्तोमा यसले–उसले हल कब्जा गर्ने भन्ने सवालै हुँदैन । जसको फिल्ममा धेरै दर्शक आउँछन्, त्यही फिल्म हलले लगाउने हो । हप्तामा दुइटासम्म फिल्म हलमा लगाउँदा त्यति फरक पर्दैन । यत्ति हो आशलाग्दो फिल्म रिलिज भइरहेका बेला अर्को फिल्म नआइदिए निर्मातालाई बढी राहत हुन्छ ।
‘वितरक कम्पनीको स्वार्थमा निर्माता जुधिरहेका छन्’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चलचित्र निर्माता संघ
विगत १५ वर्षदेखि म निर्माता संघमा आबद्ध छु । तीन कार्यकाल लगातार कार्यसमितिमा आबद्ध छु । यस बीचमा निर्माताहरुबीच फिल्म नजुधाउन हामीले थुप्रै उपाय र प्रयास ग¥यौँ तर सफल हुन सकिएन । हामी चलचित्रकर्मीबीच समझदारी नै छैन । कोही एक दिन पछाडि हट्न चाहँदैन । त्यसैले पछिल्लो समय हामीले सबैलाई ओपन छाडिदिएका हौँ ।
एउटा आशलाग्दो सिनेमा हलमा लागिरहेका बेला अर्को पनि रिलिज हुन आइदियो भने हन्ड्रेट पर्सेन्ट घाटा हुन्छ । त्यसमा शंकै छैन । जति हल, जति फिडब्याक त्यो सिनेमाले पाउनुपर्ने हो त्यो पाउँदैन । जति व्यापार हुन सक्थ्यो, त्यति हुँदैन ।
फिल्मकर्मीहरुबीच देखिने दम्भ र इगोका कारण पनि फिल्म जुधिरहेका छन् । हामीकहाँ फिल्म रिलिज हुनु एक घन्टा अघिसम्म सबैका सिनेमा सुपरहिट हुन्छन् । कोही पनि आफ्नो सिनेमाभन्दा अर्कोको राम्रो होला भन्ने स्वीकार्दैनन् । कोही पनि ब्याक जान तयार रहँदैनन् । यसको सिनेमालाई हान्ने हो भनेर तयारी गरेर बसिरहेका हुन्छन् । खोई कहाँ हान्ने हो ? कसरी हान्ने हो ?
केही ठूला वितरक कम्पनीको स्वार्थका कारण पनि फिल्म निर्माताहरु जुधिरहेको देखिन्छन् । एउटा वितरकले एउटा ठूलो फिल्म जिम्मा लियो भने अर्कोलाई रिस उठ्छ । उसले त्यही मितिमा अर्को ठूलो फिल्म ल्याउन खोज्छ । अनि पर्छन् निर्माता फसादमा । यस्तै समस्याका कारण म अहिले आफ्नो नयाँ सिनेमाको डेट अहिलेसम्म तोक्न सकिरहेको छैन ।